Imveliso yenkxaso yeChina Wrist kunye nabathengisi | qiangjing
Umkhuseli wewristrist ubhekisa kwisiqwengana sendwangu esetyenziselwa ukukhusela ukudibanisa kwesihlahla. Kuluntu lwanamhlanje, umkhuseli wesandla sisinye sezixhobo ezifanelekileyo zemidlalo yeembaleki.
Umbala: imibala eyahlukeneyo okanye inokwenziwa ngokwezifiso
Umsebenzi: khusela i-wrist ekulimaleni, unikezele ngoxinzelelo olulungileyo
Umkhuseli wewristrist ubhekisa kwisiqwengana sendwangu esetyenziselwa ukukhusela ukudibanisa kwesihlahla. Kuluntu lwanamhlanje, umkhuseli wesandla sisinye sezixhobo ezifanelekileyo zemidlalo yeembaleki. Isisihla lilungu lomzimba elihamba rhoqo abantu kwaye lelinye lawona malungu achaphazeleka. Ithuba leembaleki i-tendonitis eyenzeka esiguqweni liphezulu kakhulu. Ukuyikhusela ekubeni iphazanyiswe okanye iphiliswe ngokukhawuleza, ukunxiba isiqhano esisesinye yenye yeendlela ezifanelekileyo.
Izinto ezixhasa isixhobo semidlalo zenziwe ngokubanzi ngesixhobo esinye sokudibanisa umoya, esinokuthi siqinise iinxalenye zentloko, songeze uzinzo, kunye nokuthothisa ubunzima kunye nokudinwa kwesandla esibangelwa kukuzilolonga ixesha elide: umphandle womphetho wesandla emva konyango olukhethekileyo sinciphise kakhulu isixhobo sokukhusela ukungakhathali xa unxiba, sinciphise ubushushu phakathi komphetho wewristband yezemidlalo kunye nolusu: Uyilo lohlobo olunye lokwenza umoya alunakulungiswa nje ngokweemfuno zobuqu, kodwa nokuphumza indawo yokuhamba kwamadolo, engayi kuchaphazela intshukumo eqhelekileyo yesandla sonke.
Indima yokuqala yensimbi yomngxunya kukubonelela ngoxinzelelo kunye nokucutha ukudumba; okwesibini kukunciphisa umda kwaye ukuvumela indawo eyonzakeleyo ukuba iphinde ibuye. Kwangelo xesha, kungcono ukuba ungathikisi ukusebenza kwesiqhelo kwesandla, ngoko ukuba akukho mfuneko, uninzi lweengalo kufuneka zivumele ukunyakaza ngomnwe ngaphandle kokuphawulwa.
Abantu abathanda ukudlala i-tennis, badminton, tennis yetafile, emva kokudlala ibhola, ngakumbi xa bedlala i-backhand, i-wrist iyonzakala, nokuba ukunxiba iipads ze-elbow kuzonzakalisa, iingcali zisixelela le nto yaziwa ngokuba yi "tennis wrist". Kwaye le tyisi ye-tennis ikakhulu ngelixesha lokubetha ibhola, isihlanganisi esidityanisiweyo asitshixwanga, isitshixo esiqhinileyo asitshixiwe, umsipha wesingalo somphambili sihanjisiwe, sibangela ukonakala kwendawo yokuncamathisela, isihlanganisi esidibeneyo asikho ekhuselweyo Kusekho uguquko olugqithisileyo xa ukubetha ibhola, ukwenzela ukuba ukonyuka kumjikelo wedolo kungandiswa. Ke xa udlala i-tennis, ukuba uziva iintlungu ze-elbow, kungcono ukunxiba iibrawuza ezinqeni ngelixa unxibe iipads ze-elbow. Kwaye xa ukhetha i-brace ye-wrist yakho, kuya kufuneka ukhethe leyo engenakho ukuphakama. Ukugqwesa kulungile kakhulu ukukhusela. Kwaye ungayinxibi kakhulu okanye ikhululeke kakhulu, kakhulu iya kuchaphazela ukuhamba kwegazi, ikhululeke kakhulu kwaye ayizukukhusela. Izinto eziluncedo kwizixhobo zemidlalo zentambo: Inobunzima obukhulu, ukuphefumla kunye nokufunxwa kwamanzi. Thintela ukonzakala okudibeneyo kwesihlahla. Ukuphucula amandla esandla. Inkangeleko entle. Ukuthuthuzela. Veza ngokupheleleyo isitayile sezemidlalo. Kulula ukuhlamba. Kwezempilo: Utyalomali oluncinci. Iya kuba yinzuzo enkulu. Iimpawu zomngxunya wesileyi: 1. I-brace yewrist yenziwa ngendwangu ephezulu enomgangatho ophezulu, enokunamathela ngokusondeleyo kwindawo esetyenziswayo ukukhusela ukuphulukana nobushushu bomzimba, ukunciphisa iintlungu kwindawo echaphazelekayo, kunye nokukhawulezisa ukuphinda kubuye kwakhona. 2. Khuthaza ukuhamba kwegazi: Phakamisa ukujikeleza kwegazi kwezicubu zemisipha kwindawo esetyenziswa kuyo. Esi siphumo siluncedo kakhulu kunyango lwamathambo kunye nentlungu edibeneyo. Ukongeza, ukuhamba kwegazi olulungileyo kunokuwudlala ngcono umsebenzi we-motor yezihlunu kunye nokunciphisa ukubakho kokulimala. 3. Inkxaso kunye nefuthe lokuzinza: I-brace ye-wrist inokuqinisa ukudibanisa kunye ne-ligaments ukumelana nefuthe lamandla angaphandle. Khusela ngokufanelekileyo amalungu kunye ne-ligaments.
Inqaku leNkxaso yeWrist
Uyisebenzisa njani i-brace ye-wrist ngokuchanekileyo?
Ukuba ubuza kum ukuba ndicebise izixhobo zoqeqesho, ke ii-novices, amabhanti esinqeni kunye nenkxaso yesandla zanele.
Namhlanje sithetha ngenkxaso yesandla.
Ngaphezulu kwe-99% yabantu eyenza iimpazamo kubomi bemihla ngemihla. Umkhuseli wesandla akagcini nje ngokubonelela ngokhuseleko oluhle xa sitsala ubunzima obukhulu, kodwa kwaye esomeleza uzinzo lwamalungu esosi esikhangela kwanamaxesha aqhelekileyo. Ukubaluleka kwengqiniba ndiyakholelwa ukuba wonke umntu uyazi ukuba wakube ulimele isandla, iintshukumo ezisisiseko zokutyhala azinakwenziwa. Xa sisenza iintshukumo ezinxulumene nokucinezelwa kwemilenze engaphezulu, ubunzima bufakwa ngqo esondweni lenkxaso. Xa usebenzisa ubunzima obukhulu boqeqesho, okanye udiniwe kakhulu, kwaye uxinzelelo lwengqondo kunzima ukugxila, kunokubangela ukuba isihlwitha singcungcutheke kwaye singagcinwa. Kwimeko engazinzanga yokungathathi hlangothi, i-spraised wrist isenokuvela ukuba ayikhathali okanye i-tenosynovitis inokwenzeka ngenxa yeendlela ezimbi zokusebenzisa. Ngokuphathelele ekusetyenzisweni kwemivalo, uninzi lwabantu lubeka nje ibhulukhwe yesithsaba, kwaye usongele esinqeni amaxesha ama-3-5, kodwa ayichanekanga. Ndiza kuthetha ngomnyango ngoku: Okokuqala, beka isithupha ebhentshini, kwaye emva koko usongele kwisiseko sesandla kude kube yilapho esongele i-wrist. Amandla angaphezulu okunyusa umbane angavumeli i-wristband ukuba inxeba libe yi-2 cm ukuphakama kunoko kudibeneyo. Ukubopha okuphezulu kakhulu kuya kubangela ukuba ezo mveliso zonxibelelane ne-wristband kwaye zibangele ukuba ezo mveliso zisebenze ngokulula. Ke ngoko, akuvunyelwanga ukuba bachukumise intende yesandla, lo gama ingcambu yesundu kunye ne-wrist edibeneyo ingalungiswa. Ngokuphathelele kwibhanti yesithupha, ukubopha okanye ukungabophisi ngokweempawu zakho, musa ukubanjiswa kakhulu kule ndawo. Qaphela umgaqo xa ubhabha, ufuna ukufumana uncedo olomeleleyo, isihlahla kufuneka sibambe ngokuqinileyo ngaphandle kokubangela iintlungu, nto leyo ethetha ukuba intambo yesihlahla kufuneka irhuqwe kangangoko kunokwenzeka ngexesha lenkqubo yokubopha isixhosa. Nangona kunjalo, oku akufuneki kuzo zonke iimeko. Umzekelo, xa ufuna ukugqiba iiseshoni zoqeqesho ezininzi, unokuphumla isihlwitha sakho ukuze uqinisekise ukuhamba kwegazi okuhamba kakuhle.
Edlulileyo: Inkxaso ye-Ankle
Okulandelayo: Inkxaso yenkxaso
Inkxaso yesithupha sezandla
Imisipha ephakamisa imitya
Isilivere ion ebhinqileyo esinqeni